RAVALOMANANA TEO AMIN’NY FITONDRANA : “Tahaka ny fandroahana mpiasa an-trano ny fanalana mpiasam-panjakana”
Novakian’i Paolo Raholinarivo Solonavalona bantsilana ny fomba ratsin-dRavalomanana Marc nandritra ny fotoana nitantanany ny firenena... 13 décembre 2018
Ny taona 2002 ka hatramin’ny taona 2009 nandritra ny fivahinianany tao amin’ ny fahitalavitra tsy miankina iray tamin’ny Alarobia 12 Desambra 2018 lasa teo.
Tsy niolaka izy nilaza fa “tsy nisy tsy niaiky ny jadona nataon-dRavalomanana na mpandraharaha, na mpanao pôlitika eny hatramin’ny olon-tsotra mihitsy aza”. Nahitsiny ihany koa ny filazana fa mpanongam-panjakana i Andry Rajoelina. Tsy Rajoelina velively, hoy hatrany ity farany no nanongana an’Ingahy Ravalomanana Marc teo amin’ny fitondrana tamin’ ny taona 2009 fa ny vahoaka mihitsy no efa leo tamin’ny fomba ratsin-dRavalomanana ka nidina teny amin’ny 13 Mey naneho ny tsy fahafaliany sy nanohitra ny jadona izay nataony. Famakiana ady tamin’ny vahoaka rahateo no nataon’ity filoha teo aloha ity tamin’ny filazany fa : “Tsapao aloha ny herinareo vao mitsapa ny ahy”, ka tsy tokony ho gaga izy na hanonona an-dRakoto na Rabe ho mpanongam-panjakana satria ny vahoaka mihitsy no tonga “nitsapa ny heriny” sy namaly ny “antsy ady” nataony tamin’ izany.
Ingahy Ravalomanana Marc irery ihany, hoy hatrany ity mpitarika ny “Plateforme Miaradia” vonona hampandany ny Kandida laharana faha-13 ity no filoham-pirenena tokana teto Madagasikara nahavita nanakatona fiangonana tsy amin’antony. Sasanangy roa samihafa tokoa ny fiangonana sy ny Fanjakana amin’ny maha “Laika” ny fanjakana ka tsy tokony hafangaro ary tsy anjaran’ny filoham-pirenena mihitsy ny manome baiko amin’ny fanakatonana fiangonana noho ny antony izay tsy mazava akory.
Ankoatra izay dia nopotsipotserin’i Paolo ihany koa ny fitsabahan-dRavalomanana Marc teo amin’ny fanatanterahana ny asam-panjakana. Notsoriny sy nohazavainy fa “toy ny fandroahana mpiasa an-trano no nandroahan’ingahy Ravalomanana Marc ny mpiasam-panjakana izay tsy nanaiky nandray ny baikony tamin’izany.” Ny fanalana mpiasam-panjakana iray eo amin’ny toerany anefa dia tokony handalo dingana maro fa tsy vitan’ny hataitairana fotsiny toy izany.